Emepela weebụsaịtị ohuru nke teknụzụ igwe Wally
Emeela ka webusaiti nke Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd. weputara. Daalụ maka uche gị na mmepe nke Wally. Iji mee ka ozi gị ka mma, Wally ka emezigharịrị ma melite ya, a ga-eji kọlụm etiti akụkọ webụsaịtị melite Walley & ...
Volley n'ibu technology servo spindle R & D ịga nke ọma
Emechaala guzobe ụlọ ọrụ nnwale akọwapụtara ogologo oge. Ntọala nke ụlọ ọrụ nyocha ziri ezi enyela nkwado nkwado siri ike na ngalaba ọrụ nke ngalaba mmepụta. Na CNC nkenke machining ụlọ ọrụ, nkenke ule bụ ihe dị oké mkpa supp ...
Emebere nnwale nnwale nkenke maka teknụzụ igwe
Wally ígwè technology ọma gafere TS16949 quality management usoro asambodo
Anyị ji obi ụtọ na-eme ememme na Waley igwe teknụzụ agafeela asambodo usoro ISO / ts16949. Lso / ts 16949 bụ ISO9001, QS 9000 (US), avsq (Italiantalian), eaqf (French) na VDA6.1 (German) bụ ezigbo usoro sistemu nke akụrụngwa ụgbọala. Na nkenke, ọ bụ qua ...
Wally ígwè technology ọma gafere ISO9001 quality management usoro asambodo
Na August 26, 2009, Dongguan Waley ígwè ọrụ teknụzụ kpọbatara asambodo nke usoro ISO9001. O were otu afọ site na ọrụ nke usoro njikwa ISO9001 ruo mmezu nke asambodo. Mgbe mbido ISO9001 jikwaa njikwa, ngalaba niile achịkọtara ...
Wally ígwè teknụzụ 2020 Yearbọchị Afọ Ọhụrụ ezinụlọ na-ezukọ iji mee ememme afọ ọhụrụ
Na Disemba 31, 2019, teknụzụ Wally na-ebute Kwa Afọ Ọhụrụ, ma ememme Afọ Ọhụrụ biara dịka e siri hazie. Ngalaba nchịkwa ahụ mere atụmatụ ma hazie oriri abalị maka mmemme ụbọchị mmemme nke afọ ọhụụ. Ezinụlọ Wally niile gbakọtara iji mee ...